#WelcomeHomeAlaa: Navotsotra i Alaa Abd El Fattah, mpikatroka, rehefa nigadra dimy taona · Global Voices teny Malagasy
#WelcomeHomeAlaa: Navotsotra i Alaa Abd El Fattah, mpikatroka, rehefa nigadra dimy taona
Mifaly amin'ny famotsorana ilay bilaogera ny fianakaviana sy ny mpiara-dia
Voadika ny 01 Avrily 2019 6:03 GMT
Vakio amin'ny teny English, Español, Français, Ελληνικά, русский, عربي, Română , Italiano, English
Alaa Abd El Fattah sy i Manal Hassan. Sary avy amin'i Lilian Wagdy via Wikimedia Commons (CC BY 2.0)
Navotsotry ny manampahefana i Alaa Abd El Fattah, Ejiptiana bilaogera sady mpikatroka, tamin'ny alin'ny 28 marsa rehjefa nahavita dimy taona am-ponja noho ny fihaikana fandrarana fihetsiketsehana.
Vaky ny vaovao rehefa nanoratra tsotra tao amin'ny Twitter ny anabaviny, mpikatroka Mona Seif, hoe : “Nivoaka i Alaa.” Avy eo izy nampamirana ny sakaiza sy ny mpiaradia amin'ny anadahiny tamin'ny famoahana ny sarin'ilay mpikatroka malaza tamin'ny revolisiona Ejiptiana misaingy amin'ny alikan'ny fianakaviana, Toka, izay sambany tafahaona taminy:
— Mona Seif (@Monasosh) March 29, 2019
Fihaonana voalohany teo amin'i Alaa sy Toka 💓
Nanomboka namoaka ny sariny tao amin'ny Twitter miaraka amin'ny sora-baventy mivaky hoe “Tonga soa an-trano” ny mpanohana manerana izao tontolo izao:
In my name and in the name of all your friends at @apc_news: Welcome home, dear Alaa! <3#WelcomeHomeAlaa pic.twitter.com/MAPcO8fN8b
— Leila Nachawati Rego (@leila_na) March 29, 2019
Amin'ny anarako sy amin'ny anaran'ireo namanao ato amin'ny apc news: Tonga soa an-trano ry Alaa sakaiza! <3
@tunawezacongo #SJS à #Kinshasa fête le retour de
à la maison. #freealaa #welcomehomealaa #rdc pic.twitter.com/1D0k9WWdT9
— Si Jeunesse Savait (@tunawezacongo) March 29, 2019
Mankalaza ny fiverenan'i Alaa an-trano ny fikambanana feminista “si jeunesse savait” [“raha mba fantatry ny tanora”]
After five years in jail, activist and digital rights champion from #Egypt @alaa is free. #WelcomeHomeAlaa from your @globalvoices @advox fam pic.twitter.com/ql9xrkncv7
— Arzu Geybulla (@arzugeybulla) March 29, 2019
Afaka ny tompondakan'ny zo nomerika, mpikatroka Alaa, rehefa am-ponja dimy taona. Tonga soa an-trano avy amin'ireo havana ato amin'ny @globalvoices @advox
Feo mpitarika i Alaa teo amin'ny bilaogera ejiptiana sy mpikatroky ny teknolojia tao Kairo rehefa antomotra sy nandritra ny revolisiona ejiptiana. Niaraka tamin'ny vadiny, Manal Hassan, izy no nanampy tamin'ny fampivelarana ireo tetikasam-pikatrohana ara-teknolojia sy ara-politika niaraka tamin'ireo mpikatroka sy bilaogera tao amin'ny faritra sy ny mihoatra izany, tafiditra izany ny mpikambana maro ato amin'ny vondrom-piarahamonina Global Voices.
Nosamborina sy nesorina tao amin'ny tranon'ny fianakaviany ity mpikatroka 37 taona ity tamin'ny novambra 2013. Mihoatra ny herintaona taty aoriana, tamin'ny Febroary 2015, notsaraina ihany izy nony farany ary nahazo sazy dimy taona an-tranomaizina noho ny “fanomanana” fihetsiketseham-panoherana ny lalàna nivoaka tamin'ny taona 2013 izay mandrara ny fihetsiketsehana tsy nahazoana alalana. Raha nandray anjara tamin'ny fanoherana ny tribonaly miaramila ahatra amin'ny sivily izy tamin'ny 26 Novambra 2013, dia tsy nanana anjara i Alaa tamin'ny fanomanana izany. Nohamafisin'hy Fitsarana tampiny tao Ejipta ny fanasaziana azy tamin'ny Novambra 2017.
Arakia ny fihodin'ny famataranandro: Sanaa (ankavia) sy i Mona; Alaa Abd El Fattah miaraka amin'ny zanany lahy Kahled sy ny vadiny Manal Hassan, Alaa ary Sanaa, ary Sanaa sy Mona. Sary avy amin'ny pejy Facebook an'i Mona Seif.
Nipoitra avy amin'ny fianakaviana malaza amin'ny fanandrata-teny momba ny zon'olombelona izy, ao anatin'izany ilay mpisolovavan'ny zon'olombelona antsoina hoe Ahmed Seif El Islam, rain'i Alaa, izay nigadra imbetsaka nandritra ny fitondran'i Hosni Mubarak. Mpiaro ny zon'olombelona ihany koa ny anabavin'i Abd El Fattah, i Mona sy i Sanaa Seif izay efa ela tao amin'ny fanentanana hanoherana ny tribonaly miaramila atao amin'ny sivily.
Na nogadraina na nanaovana famotorana i Alaa nandritra ny androm-piainany isaky ny misy filoham-panjakana hafa Ejipsiana. Tamin'ny taona 2006, nosamborina izy noho ny nandraisany anjara tamin'ny fihetsiketseham-panoherana amin'ny fomba milamina. tamin'ny taona 2011, nandany roa volana tany am-ponja izy, ka tsy nahita ny nahaterahan'ny zanany voalohany, Khaled. Tamin'ny taona 2013, nosamborina izy ary nohazonina nandritra ny 115 andro tsy misy fitsarana.
Taorian'izay famotsorana izao dia mbola handany ny alina mandritra ny dimy taona ao amin'ny komisariàn'ny polisy ao an-toerana indray i Alaa .
Mba misento aloha ny fianakaviana sy ny mpanohana rehefa nandre fa nivoaka ny fonja izy. Ary toy izany ihany koa ny vondrom-piarahamonina Global Voices.
Long-time @globalvoices and @advox friend @alaa is out of jail in #Egypt after five long years behind bars. #freealaa #welcomehomealaa pic.twitter.com/kAF1ifjGMB
— Global Voices (@globalvoices) March 29, 2019
Nivoaka ny fonja i Alaa sakaizan'ny @globalvoices sy ny @advox hatry ny ela rehefa nihinana dimy be izao tao am-ponja
2 herinandro izayLibia